Senior Accountant for Blue Ribbon Trading Company Limited | Job in Myanmar
•	ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး သွက်လက်ထက်မြတ်သူ ဖြစ်ရပါမယ်။
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရပါမယ်။
•	LCCI Level 3အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
•	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၂နှစ် (သို့) ၃နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	Accounting ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရပါမယ်။
•	Salary (250000MMK ~ 400000MMK)
•	ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး သွက်လက်ထက ...
•	Assigning job and managing daily task of warehouse Staff. •	Making daily planning for loading. •	Delivering go ...